Sida loo guuriyo qoraalka sawirada Google Photos | Androidsis
Dhawaan muuqaal cusub oo xiiso weyn leh ayaa lagu dhawaaqay Sawirada Google. Codsiga wuxuu na siinayaa suurtagalnimada koobi qoraalka ku jira sawirada aan hayno ugana nuqulo codsiyada kale. Shaki la'aan, waxay u noqon kartaa wax xiiso weyn u leh isticmaaleyaal badan. In kasta oo qaar badani garanayn sida loo isticmaalo.
Sidaa darteed, hoosta waxaan ku tusaynaa habka loo nuqulo qoraalka adoo adeegsanaya Google Photos. Sidaas darteed, qoraal kasta oo aad ku hayso mid ka mid ah sawirrada aad keydisay, waxaad awoodi doontaa inaad ku nuquliso codsiyada kale qaab fudud. Waxay caawin kartaa xaalado badan.
Marka hore waa inaan ka furnaa Sawirada Google taleefankeena Android. Codsiga gudahiisa waxaa ku jiraoo raadi sawirkaas uu ku jiro qoraal in aan dooneyno inaan nuqul ka sameysano. Sidaa darteed isticmaale kasta waa inuu raadsadaa sawir la sheegay. Marka, waxaan eegeynaa geeska midig ee hoose ee shaashadda markaan ku jirno sawirka.
Halkaas ayaan gujineynaa astaanta Google Lens. Marka waa inaan dooro qoraalka aan dooneyno inaan nuqulo markan, waxay ku jirtaa sawirkaas ku jira arjiga. Markii aan xulanno qoraalka gebi ahaanba, waa inaan siinnaa ikhtiyaarka nuqul, si loogu guuriyo sabuuradda.
Sidan oo kale, qoraalka ku jiray Sawirada Google ayaa la guuriyay. Waxaan ku dhejin karnaa codsiyada kale taleefanka dhib la'aan, maadaama ay fududahay in la sameeyo. Waxaa naloo siiyay ikhtiyaarro sida wadaagista qoraalkan, adeegsiga barnaamijyada farriimaha ama ku dhajinta bogga ah meesha aan xilligaas ku jirno.
Waxa aan ku qabanno qoraalkaan oo aan soo guurnay horayba waa ganacsigeenna. Laakiin waxaan arki karnaa in nuqul ka sameynta qoraalka oo noqon lahaa sawir kasta oo ku jira Sawirada Google ay tahay wax fudud. Marka waa howl aan ka faa'iideysan karno mar walba. Miyaad horayba ugu isticmaashay shaqadan barnaamijka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo nuqul ka sameeyo sawirrada sawirada Google
120W Super FlashCharge tiknoolajiyada degdegga ah ee degdegga ah ayaa lagu bilaabi karaa Vivo Nex 3
Shirkadda Huawei waxay soo bandhigi doontaa kiniinno ay ku shaqeynayaan nidaam cusub oo ay ku shaqeynayaan